नेपालका नेताहरुको बौद्धिक शोषण भइरहेको छ ! | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
नेपालका नेताहरुको बौद्धिक शोषण भइरहेको छ !
November 4, 2017 Dishanirdesh Kanchan0Comments
विदेशी दलाल, पाश्चात्य मुलुकहरु वा मानिसहरु द्वारा हाम्रा नेताहरुको बौद्धिक शोषण भइरहेको छ भने जनताहरुको बौद्धिक शोषण पनि शोषित नेताहरुबाट भइ रहेको छ । २०१९ को संविधान निर्दलिय थियो भने २०४७ को संविधान बहुदलिय नै थियो । २०४७ को संविधान दुई तिहाई बहुमतले संशोधन गर्न सकिने प्रावधान थियो । दुई तिहाईको संख्या पु¥याउन अप्ठ्यारो थिएन । धेरैजसो संशोधनको पक्षमा निश्वार्थ भावले लाग्नेवाला थिए भने कोही खरीद विक्री हुनेखालका थिए तैपनि नेताहरुलाई त्यस्तो ध्यान जान दिएन बाह्य शक्तिले । सहजै सित हुने हरेक काम कुरालाई कठिन बनाई परजीवि नेताहरुले नेपाली जनतालाई अफवाहमुलकका सपना देखाई देशमा रजाई गर्ने गरेका तथ्यहरु हामी संग छन् ।
विदेशी शक्तिको आडभरोसामा निर्दलिय व्यवस्थाको संविधान फाली बहुदलिय व्यवस्था अटाएको संविधान निर्माण मात्र भएन विश्व प्रख्यातको संज्ञा दिइयो । अन्तमा जसले प्रजातन्त्र ल्याएका थिए उनैले लगेर गए । २०४७ को संविधानबाट आवश्यक नपर्ने दफाहरु हटाई नयाँ व्यवस्था अपनाउँनु पर्नेमा त्यस्तो नगरी देश र जनतालाई तर्साउन खास गरी भारतीय कांग्रेस आईका एजेन्टहरुको निर्देशनमा र सहयोगमा आन्दोलनको नाममा गृहयुद्धको सुरुवात गरी देशको सबै थोक मासियो नासियो विदेशीहरुको प्रत्यक्ष चलखेल बढ्यो । नेपालको राजसंस्था माथि हमला भयो विदेशीहरु खुसी भए ।
उनकै इशारामा यी काम भएका थिए । राजसंस्थाका अधिकार बढी थिए भने खोसी आफू जिम्मा लिनु राम्रो हो देश जनता र राजसंस्थाको भलाईको लागि पनि तर त्यस्तो नगरी सर्वप्रथम राजा वीरेन्द्रको वंशनास हुने गरी बन्दी राजसंस्थाका पहिलो अंशियारहरुको हत्या गराउनु र दोस्रो अंशियारलाई हावाको भरमा ज्यानमारा लगाई देशको इज्जतमा आघात पुग्ने गरी जनतामा समेत भ्रम फैलाइ अनर्गल प्रचारबाजी गर्नु, राजसंस्था, राष्ट्रपतिको सुरक्षाको दायित्व सेनाको होइन भनी प्रधानसेनापति राणा द्वारा उद्घोष गर्न लगाउनु, सरकारले हाम्रो जिम्मेवारी होइन भन्नु जस्ता गैरजिम्मेवार कुरा के ठीक थिए ?
विश्वका हरेक राष्ट्रका निष्पक्ष जनतालाई यस बारेमा सोध्नोस् जे उनले भन्छन् त्यही सत्य हुनेछ । राज्य व्यवस्था प्रकृतिले गण्तििय तरिकाले बनाएको छैन । जे अरु देशमा छ त्यस्तै हुनुपर्ने आवश्यक र जरुरी छैन । राजा बनाएको जनताले हो जे जनता भन्छन् त्यस्तै गर्नुपर्छ तर जनतामाझ भ्रामक प्रचारबाजी भने गर्नु हुदैन ।
हामी जनताले बनाएको व्यवस्था हो गणतन्त्रमा पनि राजा रहने स्थान छ । राजाको हितको लागि नभएर जनता तथा देशको हितको लागि एकताको लागि मात्र हो । नेताहरुको जस्तो राजाले भ्रष्टाचार गर्ने होइन जनताका प्रतिनिधिले जे–जति सुविधा दियो त्यो मात्र लिने हो र नेपालमा थियो पनि । झन् २०४७ पछि त सरकारको निर्देशन खुसीराजी समर्थन विना त राजाले एक पाईला पनि चाल्न सक्ने स्थिति थिएन । बोल्दा पनि सरकारलाई सोध्नुपर्ने कसै जनतालाई भेट गर्ने मन भएपनि सरकारलाई सोध्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीबाट इजाजत लिनुपर्ने बाध्यात्मकारी व्यवस्था २०४७ पछि थियो । सहज रुपमा न हामी राजालाई भेट्न सक्थ्यौं न राजा हामीलाई भेट्न सक्थे । भेट हुदाँ पनि बोल्न मिल्दैनथ्यो ।
त्यो कुरा विजया दशमीमा राजासित टीका लगाई माग्दा पनि सबैले देखे सुनेकै छ । त्यसरी बन्धनमा राखिएका राजालाई मार्नु अनि उनकै घरपरिवारलाई ज्यानमारा भनी गाउँगाउँमा भन्ने तर कारवाही नगर्ने कस्तो अनाडि प्रवृत्ति हाम्रा नेताहरुको । हो नेता हामीले चुकेका हौं केवल राज्य व्यवस्था इमानदारीले चलाउन भनेर नियम बनाई नियमले चलोस् कानूनी राज्य चलोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो तर त्यस्तो भएन । सहमति भागबण्डामा केही ग्रुपहरु मिलि शासन गर्न खोज्यो जसले गर्दा देश डगमगाई रहेको छ । वकिलहरु जनताका मुद्दा लेख्न र न्यायाधीशहरु न्याय दिनमा डराउनु पर्ने अवस्थाको सुत्रपात भएको छ किन यस्तो ? नेपालको इज्जत न्यायालय, लोकसेवा र नेपाली सेनाले धानेका थिए । जनता र देशप्रति उत्तरदायी थिए अझै छन् तर त्यो सत्य इमानदारितालाई डग्मगाउने कोशिस नेताहरुबाट भई रहेको छ ।
नेपालमा जे–जति काम भई रहेको छ आफुखूसी नभएर बाह्य शक्तिको भरमा भइरहेको छ । नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र हो उदयकाल देखि नै । जब अंग्रेज क्रिश्चियनहरुले वर्तमानको भारत कब्जा गरी क्रिश्चियन धर्म लादियो तैपनि नेपालमा हिन्दु, बौद्धमार्गी बाहेक अरु धर्म थिएन । यी धर्म माथि हमला गर्न अंग्रेजहरुले नेपालमा चोरी चोरी धर्म परिवर्तन गराउन लगाएका प्रमाणहरु राज्य सित पनि छन् । त्यो कुराको थाहा पाई नेपालबाट धर्म परिवर्तन गराउने अंग्रेज पश्चिमी राष्ट्रका गुप्तचरहरुलाई देश निकाला गरेकै हुन् । त्यही निहुँ र बदलाको भावना लिन आज नेपालले धर्म निरपेक्षताको पीडा भोग्नु परेको मात्र नभई विदेशी दलालहरुले हाम्रो नेताहरुको बौद्धिक शोषण गरी राखेकाले आफ्ना नेताहरुलाई समेत त्यस्तो शोषणबाट बचाउन र आफु पनि बच्न समस्त देशबासीहरुले एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
← महाकाली अञ्चल अस्पताल सुधारमा जोड
निर्वाचन आयोगको निर्णय →